Cheech နှင့် Chong Bud ခြံလှည့်ကွက်များ&Hack – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
Cheech နှင့် Chong Bud ခြံလှည့်ကွက်များ&Hack
၎င်းသည် (နီးပါး) အားလပ်ရက်ဝိညာဉ်ထဲသို့ဝင်ရန်အချိန်. Cheech သည် ပုံပြင်ထဲသို့ ရောက်ရှိလာသည်။ “Santa Claus နှင့် သူ၏ အဘွားအို” တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 1 ဒီဇင်ဘာလ 10 ရက်နှင့်အပိုင်း2ဒီဇင်ဘာ ၁၇ရက်. Heimy သည် ဒီဇင်ဘာ 24 ရက်နေ့တွင် ခရစ္စမတ်ကို သိမ်းဆည်းပြီး Krampus သည် ဒီဇင်ဘာလ 27 ရက်နေ့တွင် Hierba Verde သို့ လာရောက်လည်ပတ်သည်. နှစ်သစ်သည် 'ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းအတွက် သီးသန့်ဖြစ်သည်။’ ပွဲ. ပွဲများအားလုံး နံနက် ၁၀ နာရီ PST တွင် စတင်သည်။. ပျော်ရွှင်ဖွယ်အားလပ်ရက်များ, maaan!
တရားဝင် Cheech နှင့် Chong Bud Farm မိုဘိုင်းပေါင်းပင်ဂိမ်းမှ ကြိုဆိုပါတယ်။! Bud Farm ၏အစောပိုင်းကာလများဆီသို့ သင်၏အချိန်စက်!
၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်းက သူရဲကောင်းများဖြစ်သည့် Cheech နှင့် Chong တို့သည် Hierba Verde ၏မြို့ငယ်လေးတွင် သောင်တင်နေကြသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ (“အစိမ်းပင်”).
“တော်တော်လေး ထူးဆန်းတဲ့ နေရာလေးဘဲနော်, ဒါပေမယ့် အဆစ်ကို တကယ်သုံးလို့ရတယ်။"
"မင်းငါ့စိတ်ကိုဖတ်တယ်။, အဲဒါ! ဒါပေမယ့် မြက်တွေကို ဘယ်မှာ ရှင်းရမလဲ?”
ငွေအနည်းငယ်နှင့် အစေ့များပြည့်နေသော အိတ်တစ်လုံးသာရှိသည်။, ယောက်ျားလေးများသည် ၎င်းတို့၏ အိတ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ သိုလှောင်ခန်းများကို ဆူအောင်ကူညီရန်အတွက် အချို့သော ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အကူအညီကို စုဆောင်းကြသည်။! ကောက်ကျစ်သောမြို့တော်ဝန်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏လုပ်ခလစာအပေါ်, Cheech & Chong တို့သည် မြင့်မားသောဘဝဖြင့် နေထိုင်နိုင်ကြသည်။, ကျိုးနွံသောဘူးသီးအနည်းငယ်ကို အမြတ်အစွန်းရှိသောအိုးအင်ပါယာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပါ။!
တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်? ပဟေဠိဆန်သည်. Stadanko သည် Cheech ကို ဝတ်ဆင်ထားသည်။ & ချောင်ကို တစ်သက်တစ်ကျွန်းထောင်ကျတယ်။. ဒါပေမယ့် သူတို့အိမ်တွေရဲ့ အကူအညီနဲ့, ယောက်ျားလေးတွေက သူ့ရဲ့ သံလက်သီးတွေကို ရှောင်ပြီး လမ်းတလျှောက်မှာ စွန့်စားခန်းတချို့ကို ရှောင်ကြတယ်။.
Cheech နှင့် Chong Bud Farm သည် hemp နှင့် ဆေးခြောက်လူနေမှုပုံစံစသည့် အက်ပ်ကို အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ကစားနိုင်သည်။, သို့သော် အချို့သော ဂိမ်းပစ္စည်းများကို ငွေအစစ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သည်။. ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု မလိုအပ်ပါ။, သို့သော် သင်သည် ဂိမ်းအတွင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါမည်။.
ဒါကြောင့် install ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတည်ဆောက်ပါ။, ငွေသားစုဆောင်းပါ။, ချက်ချပါစေ။ & Chong သည် သင်၏ကိုယ်ပိုင် Hierba Verde ပေါင်းပင်အင်ပါယာ၏ သူဌေးဖြစ်လာခြင်းဖြင့် သင့်အား ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုကို ကူညီပေးသည်။!
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): Bud, မင်္ဂလာပါ, Cheech, Chong, Farm
← ကြိုးသူရဲကောင်း: Spider စူပါဟီးရိုး 3D လှည့်စားမှုများ&Hack ဘိန်းရှင်သန်မှု: N ကိုဝှက်ပါ။’ လှည့်စားမှုများကိုရှာပါ။&Hack →
Huggy Survival Horror Playtime – လှိုင်သာယာ&Hack